लमजुङको क्व्होलासोँथर गाउँपालिका वडा नम्बर ९ (साबिक गिलुङ गाविस) विकट गाउँमा महिलाहरुको आङ खस्ने, पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सरसम्बन्धी एकदिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ । शिविरमा ७७ जना महिलाहरुले पाठेघरको जाँच गराएका थिए ।
जाँच गर्नेहरुमध्ये २ जना महिलामा आङ खस्ने समस्या, २ जना महिलामा पाठेघरको मुखमा क्यान्सर हुने सम्भावना देखिएकोे र १ जनाको पाठेघरमा मासु पलाएको फेला परेको गण्डकी अस्पताल पोखराका स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. तारा गुरुङले बताउनुभयो । गुरुङका अनुसार क्यान्सरको सम्भावना देखिएको २ जना र पाठेघरमा मासु पलाएको १ जनालाई थप उपचारका लागि गण्डकी अस्पताल पोखरामा ‘रिफर’ गरिएको छ । शिविरमा स्वास्थ्य जाँचका लागि गिलुङ, भोजे, पसगाउँ लगायतका ठाउँबाट महिलाहरु पुगेका थिए ।
शिविरमा आएकी ८१ वर्षिया विष्णुमायाँ गुरुङले गाउँमा आफुले पहिलो पटक सेवा पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आगामी दिनमा पनि महिला लक्षीत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो । त्यस्तै ६१ वर्षिया सिता विकले आफुले गाउँमा यो सेवा पहिलोपटक लिएको बताउनुभयो । विकट गाउँ भएर आफुहरु सामन्य रोगको उपचाारका लागी पनि समसया खेप्नुपरेको गुनासो गर्का थिए । बिरामी हुँदा समयमा यातायातको व्यावस्था हुदैन । शिविरमा आएका अधिकांश महिलाहरुले शिविर प्रभावकारी भएको र आगामी दिनमा पनि यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
शिविरमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पताल पोखराका स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ डाक्टर तारा गुरुङ लगायतको टोलीले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेका थिए । जिल्ला समन्वय समिति लमजुङका स्थानीय विकास अधिकारी डिल्लीराम सिग्देलले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरुलाई लक्षित गरी निःशुल्क शिविरको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलयका प्रमुख दुर्गादत्त चापागाईले विशेषगरी बृद्धाहरुमा पाठेघरको समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले आङ् खस्ने समस्याको उपचारको लागि नेपाल सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेकाले आङ् खस्ने समस्या भएका महिलाहरुलाई स्वास्थ्य सेवा लिन आग्रह गर्नुभयो । ्यस्तै, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका क्षेत्रिय निर्देशक डा. तारानाथ पौडेलले नेपाली महिलाहरुमा आङ् खस्ने समस्या बढ्दै गएकाले यस्ता समस्या भएमा लाज नमानी उपचार गर्न महिलाहरुलाई आग्रह गर्नुयभोे । उहाँले आङ् खस्ने समस्या भएका महिलाहरुलाई आफ्नो समस्या लुकाएर नराख्न समेत आग्रह गर्नुभयोे । जिल्ला समन्वय समिति लमजुङको आयोजना र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको सहयोगमा सो शिविर सञ्चालन गरिएको हो ।